Shaandhooyinka ugu fiican ee AquaClear ee aquariums -ka, keebaa dooranaya? | Ee kalluunka
Miirayaasha AquaClear waxay u ekaan doonaan qof kasta oo muddo ku dhex jiray quraaradda, maadaama ay yihiin kuwa ugu caansan uguna khibradda badan shaandhaynta quraaradda. Miirayaasha boorsada dhabarka, oo sidoo kale loo yaqaan biyo -dhacyada, ayaa si gaar ah loo qiimeeyaa oo ay u isticmaalaan dhammaan bulshada.
Qodobkaan waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa shaandhooyinka AquaClear, waxaan ku talin doonaa qaar ka mid ah tusaalayaashooda, waan arki doonnaa tilmaamahooda oo xitaa waxaan ku bari doonaa sida loo nadiifiyo. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan la xiriira shaandhaynta osmosis ee quraaradda, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
1 Miirayaasha ugu fiican ee AquaClear
2 Sida shaandhaynta AquaClear u shaqayso
3 Noocyada Qaybaha Beddelka Shaandhaynta AquaClear
3.1 Sifaynta farsamada
3.2 Sifaynta kiimikada
3.3 Sifaynta noolaha
4 AquaClear ma tahay astaan ​​shaandhayn oo wanaagsan oo loogu talagalay aquariums -ka?
5 Miirayaasha AquaClear ma buuq badan yihiin?
6 Sida loo nadiifiyo shaandhada AquaClear
7 Intee in le'eg ayaad tahay inaad beddesho culeyska shaandhada?
Miirayaasha ugu fiican ee AquaClear
Nidaamka AquaClear ...
AquaClear A610 - Nidaamka ...
Kharashka Shaandhaynta AquaClear ...
Marka xigta waxaan arki doonaa shaandhaynta ugu fiican ee sumaddan. In kasta oo dhammaantood ay wadaagaan tilmaamo isku mid ah iyo, dabcan, tayada, farqiga ayaa inta badan laga heli karaa litirrada ugu badan ee ay quraaradu yeelan karto meesha aan doonaynno inaan ku rakibno shaandhaynta iyo tirada litir ee la farsameeyo saacaddiiba:
Shaandhayntani waxay leedahay dhammaan tayada caadiga ah ee AquaClear, iyo sidoo kale nidaam aad u aamusan, iyo dabcan sedexda nooc ee shaandhaynta, loogu talagalay aquariums -yada aan ka badnayn 76 litir. Waxay leedahay heer qulqul -socod oo ka shaqeeya in ka badan 300 litir saacaddii. Aad bay u sahlan tahay in la isku soo ururiyo oo si dhib yar bay u qaadataa meel kasta.
Xaaladdan waxay ku saabsan tahay shaandho u oggolaanaysa in lagu rakibo biyo -biyoodka illaa 114 litir, taasina waxay socodsiin kartaa in ka badan 500 litir saacaddii. Sida dhammaan shaandhooyinka AquaClear, waa aamusnaan waxaana ku jira saddex sifeyn oo kala duwan (farsamo, kiimiko iyo bayooloji). Iyada oo leh AquaClear biyaha ku jira quraaraddaada ayaa si fudud u noqon doona mid cad.
Qaabkan shaandhada AquaClear waa la mid ah kuwa kale, laakiin waxaa lagula talinayaa in lagu isticmaalo quraaradaha ilaa 190 litir. Waxay ka shaqayn kartaa qiyaastii 700 litir saacaddii. Sida moodooyinka kale, AquaClear 50 waxaa ku jira xakamaynta socodka oo aad ku yarayn karto socodka biyaha.
Waxaanuna ku dambaynaynaa nooca ugu weyn ee miirayaasha sumaddan, oo aan loo adeegsan karin wax ka badan ama ka yar marin -biyoodka illaa 265 litir. Shaandhayntani waxay sidoo kale ka shaqayn kartaa in ka badan kun litir saacaddii. Aad bay uga weyn tahay kuwa kale, taas oo hubinaysa awood aan la rumaysan karin (aad bay u badan tahay in faallooyinka qaarkood ay sheegaan in loo habeeyay ugu yaraan).
Sida shaandhaynta AquaClear u shaqayso
Miirayaasha AquaClear waa maxay loo yaqaan shaandhooyinka boorsada dhabarka. Noocyada shaandhaynta ayaa si gaar ah ugu habboon aquariums -yada yaryar iyo kuwa dhexe. Waxay "ku dheggan yihiin" bannaanka haanta, mid ka mid ah geesaha sare (haddaba magacooda), sidaa darteed ma qaataan meel bannaan oo ku dhex jirta quraaradda, sidoo kale, uma badna sida shaandhooyinka dibadda ee loogu talagalay quraaradaha waaweyn. Intaa waxaa dheer, waxay biyaha ku ridaan nooc biyo -dhac ah, taasoo hagaajinaysa oksijiinkeeda.
Shaandhada AquaClear waxay u shaqaysaa sida shaandheeyeyaasha badankood ee noocan ah:
Marka hore, biyaha ayaa ka soo gala tuubbo caag ah wuxuuna galaa shaandhada.
Kadibna qalabku wuxuu sameeyaa shaandhaynta hoose ilaa sare biyuhuna waxay maraan saddex shaandheeye oo kala duwan (farsamo, kiimiko iyo noolaha, oo aan gadaal ka hadli doonno).
Marka shaandhaynta la sameeyo, biyuhu waxay dib ugu dhacaan quraaradda, markan oo nadiif ah oo aan lahayn nijaas.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan miirayaasha sumaddan aadka u wanaagsan ayaa ah inay ku jiraan, marka lagu daro saddexda shaandheeye ee kala duwan, a xakamaynta socodka oo aad ku yarayn karto socodka biyaha ilaa 66% (tusaale ahaan, markaad quudineyso kalluunkaaga). Matoorka shaandhayntu marna ma joojiyo shaqada, iyo, xataa haddii socodka la yareeyo, tayada biyaha la sifeeyay midna yarayn maayo.
Noocyada Qaybaha Beddelka Shaandhaynta AquaClear
Sidaan horay u sheegnay, Miirayaasha AquaClear waxay leeyihiin saddex nidaam shaandhayn si looga saaro dhammaan nijaasta biyaha oo u daa sida ugu macquulsan.
Soo -dejinta Kaarboon AquaClear ...
Waa kan shaandhaynta ugu horreysa oo bilaabmaysa marka shaandhayntu shaqayso, taas oo ah tan dabinaysa wasakhda ugu weyn (sida, tusaale ahaan, haraadiga saxaro, cunto, ciid laalaadiyay ...). Waad ku mahadsan tahay sifeynta farsamada, biyuhu ma aha oo kaliya kuwo nadiif ah, laakiin sidoo kale waxay gaaraan sifeynta bayoolojiga sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, shaandhaynta ugu adag uguna jilicsan ee saddexda. Xaaladda AquaClear, shaandhayntan waxaa lagu sameeyaa xumbo, habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo hadhaagan.
Wax yar oo ka sarraysa xumbada fulisa shaandhaynta farsamada ayaan ka helnaa sifeynta kiimikada, oo ka kooban kaarboon firfircoon. Waxa nidaamkan shaandhayntu sameeyo waa baabi'inta walxo aad u yar oo ku milmay biyaha oo sifeynta farsamadu aysan awoodin inay dabin. Tusaale ahaan, aad bay faa'iido u leedahay markaad rabto inaad nadiifiso biyaha ka dib markaad daawayso kalluunkaaga, maadaama ay ka saari doonto wixii daawo ah ee hadhay. Waxay kaloo u adeegtaa in meesha laga saaro urta. Shaandhayntan laguma talinayo in lagu isticmaalo aquariums -ka biyaha macaan.
Keenista AquaClear ...
Ugu dambayntii waxaan u nimid shaandhaynta ugu jilicsan, tan noolaha. Waana in sifeyntaan ay mas'uul ka tahay bakteeriyada ku nool Biomax, tuubooyinka dhoobada ee AquaClear ku adeegsato shaandheyntaan. Bakteeriyada ku jirta canutillos -ka ayaa mas'uul ka ah inay u beddesho walxaha u yimaada (tusaale ahaan, ka soo daadanaya dhirta) walxo sun ah si aad ugu ilaaliso quraaraddaada caafimaad wanaagsan iyo kalluunkaaga oo faraxsan. Intaa waxaa sii dheer, sifeynta bayoolojiga ee AquaClear ay ku siiso waxay leedahay faa iido in loo adeegsan karo biyo -biyoodka cusub iyo cusbada.
AquaClear ma tahay astaan ​​shaandhayn oo wanaagsan oo loogu talagalay aquariums -ka?
AquaClear waa shaki la'aan a astaan ​​aad u wanaagsan oo loogu talagalay bilowgayaasha iyo khubarada adduunka aquariums -ka labadaba. Ma aha oo kaliya sababta oo ah waa astaan ​​leh taariikh aad u badan iyo in sidoo kale laga heli karo meelo badan (ha ahaato onlayn ama dukaamada jirka ee xayawaanka, tusaale ahaan) laakiin sababta oo ah fikradaha ku faafaya internetka dhammaantood waxay leeyihiin qodobo badan caadi ah: inay yihiin Waa astaan ​​caadi ah, oo leh waayo -aragnimo aad u badan oo miirayaasha dhisidda, taas oo ah tan ugu sarreysa oo daryeel badan gelisa alaabteeda.
Miirayaasha AquaClear ma buuq badan yihiin?
Miirayaasha AquaClear waxay caan ku yihiin aamusnaan badan. Si kastaba ha ahaatee, waa wax iska caadi ah inay soo garaacaan maalmaha ugu horreeya ee isticmaalka, maadaama ay weli tahay inay xoogaa duubis ah qaataan.
Xeelad si aysan u dhawaaqin wax badan ayaa ah in la isku dayo in shaandhayntu aysan ku dul saarnayn quraaradda quraaradda, maadaama marar badan ayuu xiriirkani keenaa gariir iyo sawaxan, taasoo noqon karta wax laga xumaado. Si tan loo sameeyo, ka sooc shaandhada galaaska, tusaale ahaan, adigoo gelinaya siddooyin caag ah. Mawqifka shaandhayntu sidoo kale waa muhiim si uusan u samayn buuq aad u badan, waa in uu gebi ahaanba toosan yahay.
Ugu dambayn, haddii uu sii socdo buuq badan, waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso inay leedahay iyo in kale xoogaa hadha ah oo adag (sida jajab ama jajab) ayaa u dhexeeyay marawaxadaha iyo usha mootada.
Sida loo nadiifiyo shaandhada AquaClear
Miirayaasha AquaClear, sida shaandhooyinka oo dhan, waa in la nadiifiyaa waqti ka waqti. In kasta oo inta jeer ee ay tahay inaad sameyso waxay kuxirantahay hawo -mareen kasta iyo awoodiisa, waxaad caadi ahaan ogaan doontaa inay tahay waqtigii nadiifinta marka socodka qulqulka uu bilaabo inuu yaraado (badiyaa labadii toddobaadba mar) burburka soo ururayay awgood.
Marka ugu horeysa waa inaad ka saar shaandhada si aysan u dhicin dhimbiil aan la filayn ama ka sii daran.
Kadib kala qaad qaybaha shaandhada (mootada kaarboonka, tuubooyinka dhoobada iyo isbuunyada shaandhada). Xaqiiqdii, AquaClear waxay horeyba ugu jirtaa dambiil raaxo leh oo nadiifinta wax walba aysan qaadanayn wax ka badan shan daqiiqo.
Qaar dhig biyaha quraaradda ee weel.
Aad bay muhiim u tahay inaad u isticmaasho biyaha quraaradda nadiifi isbuunyada iyo qaybaha kale shaandhee. Haddii kale, haddii tusaale ahaan aad isticmaasho biyaha tuubada, kuwani waxay noqon karaan kuwo wasakhaysan oo shaandhayntu way joogsanaysaa.
Sidoo kale waa muhiim inaad mar kale samayso dhig wax walba meeshii saxda ahaydHaddii kale, daboolku si fiican uma xirmi doono, sidaa darteed shaandhayntu waxay joojin doontaa inay si habboon u shaqayso.
Ugu dambeyntii, marna ha ku shubin shaandhada oo ha qallajinHaddii kale waxaa jira halis ah in uu aad u kululaado oo gubto.
Intee in le'eg ayaad tahay inaad beddesho culeyska shaandhada?
Caadi ahaan culayska shaandhada waa in la beddelaa waqti ka waqti si shaandhayntu u sii waddo inay shaqadeeda si sax ah u qabato, haddii kale xaddiga qashin -qubka ah wuxuu saamayn karaa tayada sifeynta iyo qulqulka biyaha. In kasta oo, sida had iyo jeer, ay aad ugu xidhan tahay awoodda quraaradda, kan ugu caansan waa:
Beddel isbuunyo labadii sanaba mar ama wax la mid ah, ama markay dhegdhegto oo jabto.
Beddel shaandhaynta kaarboonka firfircoon bishii mar ama wax la mid ah.
ka kuul dhoobada ah guud ahaan ma aha in la beddelo. Kolba sida ay bakteeriyadu u korodho, ayay u fiicnaan doontaa inay qabtaan shaqadooda shaandhaynta!
Shaandhooyinka AquaClear waa xal tayo leh oo lagu sifeeyo quraaraddaada labadaba kuwa ku cusub adduunkan iyo khubarada, iyo sidoo kale kuwa leh quraaradda cabbirka suubban ama kuwa la tartami kara badda lafteeda. Noo sheeg, shaandheeyehee ayaad ku isticmaashaa quraaradda? Miyaad ku talinaysaa? Waa maxay waayo -aragnimada aad ku lahayd summaddan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Miirayaasha AquaClear